နယ်သာလန်နိုင်ငံ သဟိဂ်မြို့က ICJ တရားရုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားလိုလုပ် တရားစွဲဆိုထားတဲ့အပေါ် ထောက်ခံသူတွေရော၊ ကန့်ကွက်သူတွေပါ စုဝေးရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ ICJ မှာ ရိုဟင်ဂျာအရေး လှုပ်ရှားသူတွေ ပြည်ပရောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေက ထောက်ခံ စုဝေးခဲ့ကြသလို၊ ခုခံချေပမယ့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံသူတွေလည်း သဟိဂ်မြို့မှာ စုဝေးခဲ့ကြတာပါ။
နယျသာလနျနိုငျငံ သဟိဂျမွို့က ICJ တရားရုံးမှာ မွနျမာနိုငျငံအပျေါ ဂမျဘီယာနိုငျငံက တရားလိုလုပျ တရားစှဲဆိုထားတဲ့အပျေါ ထောကျခံသူတှရေော၊ ကနျ့ကှကျသူတှပေါ စုဝေးရောကျရှိနကွေပါတယျ။ ICJ မှာ ရိုဟငျဂြာအရေး လှုပျရှားသူတှေ ပွညျပရောကျ မွနျမာတိုငျးရငျးသားတှကေ ထောကျခံ စုဝေးခဲ့ကွသလို၊ ခုခံခပြေမယျ့ မွနျမာကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့ကို ဦးဆောငျလာတဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ထောကျခံသူတှလေညျး သဟိဂျမွို့မှာ စုဝေးခဲ့ကွတာပါ။
၁ Kachin & Karen organizations joined protests with Rohingya groups . Around 100 people outside in total.
၂ Daw Aung San Suu Kyi's supporters at ICJ
၃ Kachin & Karen organizations joined protests with Rohingya groups . Around 100 people outside in total.
၄ Daw Aung San Suu Kyi's supporters at ICJ